Gabar kufsigeeda uu gilgilay waddan ka tirsan Carabta - Awdinle Online
Gabar kufsigeeda uu gilgilay waddan ka tirsan Carabta
Kiis ku saabsan kufsi iyo dil loo geystay gabadh 19 jir ah ayaa kala qeybsanaan dhinaca ra’yiga ah ka dhex abuuray shacabka waddanka Algeria, kaddib markii meydka haweeneydaas da’da yar laga helay gudaha kaalin shidaal oo ku taalla gobolka Boumerdes, ee bariga dalkaas.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa soo tabisay in gabadha uu afduubtay qof ay horay ugu socotay dacwad maxkamadeed, iyadoo markaas kaddib la kufsaday, noloshana lagu gubay.
Gabadha, oo lagu magacaabi jiray Shaimaa, hooyadeed ayaa xaqiijisay inay sanadkii 2016-kii maxkamadda ka diiwaan galiyeen kiis kufsi ah oo loo heystay isla qofka hadda lagu eedeeyay afduubkeeda, sidaas awgeedna uu mar kale gabadheeda kula kacay fal aargoosi ah.
Baraha bulshada ayaa si weyn loogu faafiyay muuqaal laga arkayo Shaimaa hooyadeed oo dalbaneysa in la ciqaabo qofka ka dambeeyay fal-dambiyeedkaas, waxayna taageero ballaadhan ka heshay shacabka reer Algeria.
Previous articleAxmed Madoobe oo shuruud ku xiray in doorashada Xildhibaano ka dhacdo Gedo
Next articleCiidamada Ammaanka oo Muqdisho ku dilay Nin weerar geysan rabay